Hilary နှင့် Watts - Your Brain On Porn မှ“ အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည် ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေသည်ဟူသောအဆိုကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်သည်”
ညစ်ညမ်းစွဲ: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (2011)
အပေါ်မှတ်ချက် - Hilton နှင့် Watts တို့၏“ အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည် ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေသည်ဟူသောအဆိုကိုထောက်ခံရန်ပျက်ကွက်သည်”
တစ်ဟုန်ထိုး Neurol Int ။ 2011; 2: 64 ။
အပေါ် Commentary: အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့ပျက်ကွက်
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ၂:၄၄ ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 10.4103 / 2152-7806.81427
Donald L. ဟီလ်တန်, Jr1 နဲ့ Clark က Watts
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှတုန့်ပြန်၏အရှိဆုံးတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရှုထောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းစွဲလွှမ်းခြုံရသောသဘာဝအစွဲ၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့သုတေသနတစ်ခုကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကွောငျးနားလည်မှု, ရှုထောင့်, ဒါမှမဟုတ်အသိအမှတ်ပြု၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဦးဆောင်စွဲ neurobiologists ကိုထောကျပံ့ဖို့ဆက်လက်သောစာရေးဆရာများသဘာဝအစွဲ၏ဤရဝုဏ်ကိုပယ်ကြပြီသိသာသည်, ထိုကြောင့်ထိုသူတို့သံသယတွေနဲ့ညစ်ညမ်းစွဲရှုမြင်မယ်လို့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အထူးသဖြင့်မှတ်သားထိုက်သည်မှာ theirFosB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရောသဘာဝပါပါစွဲစွဲလမ်းစေသောပြည်နယ်များတွင်မော်လီကျူးအကူးအပြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏အခန်းကဏ္ role ၏ကြီးထွားလာသောသက်သေအထောက်အထားများကိုသူတို့သတိမပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ osFosB နှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိရှုထောင့်ကိုနားလည်ရန်အတွက် Dr. Eric Nestler ၏သုံးသပ်ချက်စာတမ်းသည် Royal Society ၏ Philosophical Transaction တွင်ထုတ်ဝေသည်။ ထင်ရှားသောစွဲနေသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါဗေဒပညာရှင်များ၏ဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးတွင်ဤစာတမ်းအား“ စွဲလမ်းမှု၏ Neurobiology - အသစ် vistas” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။24] ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်မှတ်ချက်ပေးသူများသည်၎င်းတို့၏မှတ်ချက်များနှင့်အတူ Nestler ၏စက္ကူ၏အဓိကအချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော osFosB ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဤတုံ့ပြန်မှုတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
ΔFosBအဆိုပါ Fos မိသားစုကူးယူအချက်များအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။  Fos မိသားစုပရိုတိန်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်း, ယေဘုယျအတွက်ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့အချက်ဖြစ်သောနျူကလိယ accumbens နှင့် dorsal striatum အဖြစ်ဆုလာဘ်ဒေသများအာရုံစိုက်အတူလျင်မြန်စွာပျက်ဆီးဆုံးရှုံး။ သူတို့ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နာရီအတွင်းသွားပြီနေကြသည်။
ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူစုဆောင်းသောΔFosBအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရောင်စဉ်ကိုဖြတ်ပြီး, အ Fos မိသားစုအခြားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်မတူပါ။  ထို့ကြောင့်ΔFosBမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ကာလအတွင်းမှာပင်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများကွိုးစားအားထုနေဆဲဖြစ်သည်။ Nestler နှင့်အခြားသူများΔFosBတစ်ကြောင်းအဆိုပြုထားကြပါပြီ "ဟုစွဲပြည်နယ်အစပျိုးထိန်းသိမ်းနည်းကူညီပေးသည်ကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ် '' မော်လီကျူး switch ကို '' ။ " 
Bitransgenic ကြွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှထင်နေကြသည်ရှိရာအထူးသတည်းဟူသောရွေးချယ်သည့် dynorphin ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ΔFosBထုတ်လုပ်ရန်သွေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့နာတာရှည်မူလကပင်ΔFosB overexpress မကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသကဲ့သို့, မူးယစ်ဆေးပေးထားခဲ့လျှင်အဖြစ်သူတို့ကအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုပုံကြီးချဲ့အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ; ဒီဖြစ်စဉ် [ကင်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးရှုမြင်14] နှင့် opioids ။  တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းမော်ဒယ်အတွက်ΔFosB overexpress ဖို့သွေးဆောင်နေသောကြွက်များနှင့်အတူလေ့လာရေးဒီတုံ့ပြန်မှုပုံတူကူးယူခဲ့ကြ။ [33သူတို့ပြီးသားစွဲလျှင်အဖြစ်] တနည်းအားဖြင့်ΔFosB overexpressing မူးယစ်ဆေးရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များပြုမူ။
ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီသဘာဝအစွဲ၏တည်ရှိမှုဆက်စပ်သလဲ, နျူကလီးယပ် accumbens ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်နှင့်ကြိုးလူ့ interaction ကသဘာဝဆုလာဘ်အပြုအမူတွေ၏ salience အတွက်အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ Nestler အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့အထောက်အထားဆွေးနွေးထားပါတယ် "ဒါခေါ်သည့်သဘာဝစှဲ။ ​​ဥပမာ, ရောဂါဗေဒကျော်, လောင်းကစား, လေ့ကျင့်ခန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ"  ထူးခြားသည်မှာΔFosB, ပုံမှန်ထက်ဘီးပြေး၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းပြကြောင်းကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းစွဲများအတွက်မော်ဒယ်စုဆောင်း။  ဒီကိုလည်း sucrose သို့မဟုတ်လိင်၏စားသုံးမှုကျော်နာတာရှည်ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။  ΔFosB overexpressing အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်-mediated ကြွက်လည်း "ဤသဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက် Drive နှင့်စားသုံးမှုတိုးပွားစေပါသည်။ " မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ကိုက်ညီအပြုအမူပြပေးသောအစောပိုင်းကရည်ညွှန်း  တစ်ဦးရန် (လွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာဇွန်ပရိုတိန်း) နဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်အတွက်ΔFosB၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု Blocking အဆိုပါသဘာဆုလာဘ်၏ overconsumption ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒေါက်တာ Nestler အကျဉ်းချုပ်: "။ အဲဒီတွေ့ရှိချက်ကဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ΔFosBမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များအတွက်ပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာသဘာဝကဆုလာဘ်အဘို့မသာတိရိစ္ဆာန်များ sensitizes, နှင့်သဘာစွဲနေတဲ့ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါအကြံပြု" 
အခြားအမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများလိင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ΔFosB, စွဲလမ်းတဲ့အမှတ်အသားမှချည်ထားသောသောအဓိကအကြောင်းရင်းအားရှိ၏။ ဥပမာ, နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်။  အိုး et al။ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ core နဲ့ shell ကို, အ medial prefrontal cortex, အ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် caudate putamen accumbens အဖြစ် limbic-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ΔFosBတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းသရုပ်ပြပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစက္ကူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သိသိသာသာ "ΔFosB, နေချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး attenuated ပိတ်ဆို့ခြင်း နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ΔFosB၏ overexpression လျော့နည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုတိုးမြှင်ပံ့ပိုးစေသော။ " (အလေးထားထည့်သွင်းထားသည်) Royal Society စာတမ်းတွင် Nestler ၏မှတ်ချက်ကိုသုံးသပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ΔFosB၏အဆင့်သည်“ တစ် ဦး ချင်း၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနှင့်အတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်ရန်“ biomarker” ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားစွဲလမ်းစေသည့်အပြင်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ကုသမှုကာလအတွင်း၎င်း၏တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်ခြင်းစသောစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်သည်။ ”  ဤအမြင်များကိုရှင်းလင်းစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက် neurobiological အမှတ်အသားကိုထောက်ခံကြသည်။ အိုး et al။ , အလုပ် ... သည်ဤဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးများ၏ဝယ်ယူအတွက်ΔFosBတစ်ခု, တာဝန်အခန်းကဏ္ဍညွှန်ပြရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း "အကျဉ်းချုပ် ... ကျနော်တို့ သင်တန်းနည်းပြအပြုအမူ၏ဤရေရှည်စကားရပ်ကိုသဘာဝအကျိုးသည်မှတ်ဉာဏ်တစ်ပုံစံကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအဆိုပြု; ဤအရပ်မှ, NAc အတွက်ΔFosBဆုလာဘ်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးအာမခံ။ " (အလေးပေးထည့်ပြီး) အိုးထဲကနေနောက်ထပ်စက္ကူ et al။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြန်လည်စတင်နှင့်အတူ abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်ကြားဖြတ်ဖြစ်စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အမှန်တကယ်အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်များကိုတိုးပွါးကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်တဖန်သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲ psychostimulants ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်မြင်ကြသူတွေကိုတူ "အနှစ်ချုပ် ... သဘာဝအကြိုးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု - - ထို mesolimbic စနစ်ကြာရှည် neuroadaptation သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတင်ပြဒေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကွောငျးတငျပွ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အမူအကျင့် plasticity, အထူးသဖြင့်တစ်ဦး sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုချက်ချင်းရေရှည်ရလဒ်ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ " (အလေးပေးထည့်ပြီး)
ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘာဝအစွဲတစ်ခု neurobiological အခြေခံ supporting နောက်ထပ်ဇီဝဖြစ်စဉ် parameter သည် dopamine အဲဒီ receptor တွေပျက်စီးမှုကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဝမ် et al။ , (D2) မူးယစ်ဆေးစွဲတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းဆင်တူအဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူလျှော့ချအဲဒီ receptor နှင့် BMI ဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆင့် dopamine သရုပ်ပြခဲ့သည်။  မကြာသေးမီကဂျွန်ဆင်နှင့် Kenny ကထုတ်ဝေတဲ့တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်လေ့လာမှု "အရေးပါတယ်လို့, စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအစာနှင့်ထိတွေ့ကြွက်ဆုလာဘ် hyposensitivity နှင့် compulsive ကဲ့သို့စားတဲ့လေးနက်တဲ့ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဝလွန်ကြွက်များအတွင်း maladaptive အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင် striatal D2R အချက်ပြအတွက်အစားအစာ-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှုကနေပျေါပေါ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး Overconsumption အလားတူ striatal D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆလျော့နည်းစေ, ဆုလာဘ် hypofunction တစ်လေးနက်တဲ့ပြည်နယ် induces နှင့်အပြုအမူကိုယူပြီး compulsive ကဲ့သို့မူးယစ်ပေါ်ပေါက်ရေးအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ထို့ကြောင့်အဝလွန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်အလားတူ neuroadaptive တုံ့ပြန်မှုကနေပျေါပေါကျစခွေငျးငှါကိုညွှန်းအတွက်ယခင်အလုပ်ကိုထောကျပံ့။ " (အလေးပေးထည့်ပြီး)
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသရုပ်ပြထားပါတယ် [ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ် activation လျော့နည်းသွား28] နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများအတွက် dopamine ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသည် hypersexuality နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှစ်ခုလုံးကို iatrogenically ဖြစ်ပေါ်စေသည်။13] Reuter et al။ , ... "မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့အမာခံများဖြစ်သော ventral striatum ၏ကျဆင်းခြင်း activation အကျဉ်းချုပ်နှင့်ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောသော VMPFC activation, လျော့နည်းသွား ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စွဲသောအမြင်မျက်နှာသာ။ " (အလေးပေးထည့်ပြီး)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင် Nestle ကအားဖြင့်ΔFosBနှင့်အခြားသူများအပေါ်ဟောပြောမှုတွေအလုပ်ရှေ့ဆောင်သည်နှင့်သဘာစွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ် neuromodulation ၏ရှုထောင့်ဖို့စဉ်းစားအတွက်ရှုခင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဒီအယူအဆအပေါငျးတို့သရှုထောင့်အပေါ်တစ်ဦးဇီဝအလင်းတတ်၏။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ΔFosBနှင့်လိင်အကြားဆက်ဆံရေးရှာဖွေစူးစမ်းမကြာသေးမီကအလုပ်မစဉ်းစား, ဒီဒေတာကိုသဘာဝအစွဲထဲမှာ neuromodulation ၏တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. confirmatory ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ ကျနော်တို့ဆုလာဘ်စင်တာများနှင့်ဆက်စပ်အာရုံခံလူဦးရေ၏ hypoplasia ပတ်သက်. VBM လေ့လာမှုများအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းအဆိုပါအချက်များကဤရှုထောင့်ကနေ emanated ။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှုစာတမ်းများကျုံ့လေးကွဲပြားခြားနားသောစွဲလမ်းပြည်နယ်များနှစ်ခုမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာနှစ်ခုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အကယ်စင်စစ်ဤသူစာတမ်းများ၏စာရေးဆရာများအဆိုပါကင်း [ပေမယ့်, causation addressing ကိုမခံခဲ့ရပါ14] နှင့်အဝလွန်ခြင်း  စာတမ်းများကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်နှစ်ဦးစလုံး ကျုံ့၏ဒေသများဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဆက်ဆက်အချက်တစ်ခုဖြစ်ရသောမွေးရာပါ, စိတ်ကြွဆေးများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ရွေးချယ်ကျုံ့ခြင်း, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်တကွ, ပြောင်းပြန်ရှင်းပြမထားဘူး။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ရဝုဏ်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ် cortical ဒေသများ၏ရွေးချယ်ကျုံ့သဘာဝကဆုလာဘ်, အထူးသလိင်အတွက်စသညျ့အတွက် neuroplasticity အတည်ပြုလက်ရှိသုတေသနပေးထားသောတစ်ဦး neuromodulatory အလငျး၌ကြည့်ရှုအားပေးစေခြင်းငှါ။ ဖြစ်ပါသည် ဤအသဘောတရားများကိုပင်အခြေခံအကျဆုံးနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောက်ချက်အားစိန်ခေါ်မြား၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းတိကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များအားဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ဥပမာ, ΔFosB၏အရေးပါမှုကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ပယ်ဒီပရိုတိန်းကိုရည်မှတ်သုတေသနပြုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သူတို့၏မှုကိုထငျရှားစမရှိခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုΔFosBသွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြနေချိန်တွင်သူတို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူစကားရပ်၏ပုံစံ dynorphin + နှင့် enkephalin + အလတ်စား spiny အာရုံခံနှစ်ခုလုံးအနှံ့ကျယ်ပြန့်တိုးချဲ့ကြောင့်သဘာဝအဆုလာဘ်၏ overconsumption နှင့်အတူဆက်စပ် overexpression အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ dynorphin + အလတ်စား spiny အာရုံခံမှချုပ်ထားမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်ပျက်ကွက် နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအတူ။  အောက်ပါမှတ်ချက်သည် osFosB ၏စွဲလမ်းမှုအတွက်မော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုတစ်ခု၏အရေးပါမှုကိုသူတို့နားမလည်ခြင်း၏ဥပမာဖြစ်သည်။ “ ဒါကလိင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ကြွက်တွေအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲ။ သင့်နာမည်ကို osFosB အတွက်စာရင်းတွင်ထည့်ပြီးသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သည်အတွေ့အကြုံရှိသောကြွက်များနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ ” အာရုံကြောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအရာများကြောင့်ဖြစ်စေထိခိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်ဆုလာဘ်စင်တာများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် cortical ဒေသများရှိရွေးချယ်သောလှည့်ဖျားခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရန်ပျက်ကွက်ကြသည်။ Nestler စာတမ်းပါရုပ်ပုံ (၂) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအထက်ပိုင်းအာရုံခံ atresia ၏အယူအဆသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝစွဲလမ်းမှုအတွက်ဘုံလမ်းကြောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။23] ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးပါသောဖျန်ဖြေဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤသည် atresia အဆိုပါ VTA ထံမှ NA သို့ dopaminergic input ကိုယုတ်လျော့ခြင်း, နှစ်ဦးစလုံးအလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျအတွက်ΔFosBတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ, အ cortex ကနေ glutaminergic input ကိုလျော့နည်းသွားနှင့်အတူနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ cortex လျော့နည်းသွားမြစ်အောက်ပိုင်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် atrophy နိုငျသညျ။  စွဲအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့တိုကျရိုကျလိုငွေပြမှုမူးယစ်ဆေးသွေးဆောင်သို့မဟုတ်သဘာဝကျကျသွေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိ, အမာခံဖြစ်ပြီး, ပြသထားသော hypofrontal syndrome ရောဂါစိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းဆင်တူသည်ရှိသေး၏ဆိုလိုသည်မှာ။  နောက်ထပ်မကြာသေးမီက "စွဲ" ဤအခြေအနေတွင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကိုတငျပွမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်ဒေသများအတွက်ရွေးချယ် cortical ကျုံ့၏သာဓကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 
မွေးရာပါတစ်အခန်းကဏ္ဍသိသာပေမယ့် causation ဘို့မဆိုအခန်းကဏ္ဍငြင်းပယ်စွဲထွက်ပြုမူလတ်ရွေးချယ် preatrophied တစ်ဦးချင်းစီ၏လောကဓာတ်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်ဤရဝုဏ်အများကြီးလျော့နည်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ကျနော်တို့ကအဆိုပါ induction အတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်စွဲလမ်းပြည်နယ်များထို့နောက်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ပတ်သက်. confirmatory data တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုပေးထား causation အနည်းဆုံးတစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍထက်ကိုရှာပါ။
အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကအနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်း causation ဤကိစ်စတှငျထောကျပံ့တာဖြစ်ပါတယ်, သဘာဝစွဲနှင့် ပတ်သက်. neuromodulation ၏မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်စွာΔFosBလေ့လာမှုများကထောက်ခံနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် D2R နှင့် fMRI လေ့လာမှုများအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝုဏ်အတည်ပြုဖြစ်စေမ ယခင်ကထောက်ပြသည်။ သော induction ပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခု causation အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အထူးသဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချ bitransgenic နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်သွေးဆောင်ကြွက်အပေါ်ယခင်ကကိုးကားအလုပ်အရာဖြစ်ပါသည် စွဲလျှင်အဖြစ်ပြုမူနှစ်ခုစလုံးΔFosBတစ်ခုတည်းသော variable ကိုဖြစ်ခြင်း၏သဘာဝအများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ, overexpression ၌တည်၏။ 
အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းစွဲ၏ရောဂါများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျုမှနျ NIDA ၏နာမတော်ပြောင်းလဲနေတဲ့အဘို့, ဂျာနယ်သိပ္ပံအတွက်ခေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု (NIDA), ဒေါက်တာနိုရာ Volkow ၏ဦးခေါင်း, ငါတို့အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရန် "ထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်း, လောင်းကစားများနှင့်အစားအစာအဖြစ်စှဲပတ်ဝိုင်း ... သူမသည်ကျွန်တော်မြေတပြင်လုံးကိုလယ်ကိုကြည့်သင့်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ချင်ပါတယ်။ "  သိနာတောင်ပေါ်မှာဒေါက်တာအဲရစ် Nestler သူကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုဖော်ပြအတွက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "သဘာဝစွဲ" ကိုအသုံးပြုသည် "ရောဂါဗေဒကျော်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ။ " ဟားဗတ်မှာဒေါက်တာ Howard Shaffer ငါလာသောအခါငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကြီးမြတ်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ် "ဟုပြောသည် ငါကကျွန်တော်စွဲလမ်း၏နိုငျငံတျောအတှငျးရှိပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် process ကိုစှဲပါဝင်သည်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိငြင်းခုံဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်, နည်းပညာပိုင်းနည်းနည်းရှေးခယျြမှုလည်းမရှိ "နှင့်ဆက်လက်" ... စွဲလမ်းတွေအများကြီးအတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ " သည့်အခါထိုကဲ့သို့သော DRs အဖြစ်သိပ္ပံပညာရှင်များ။ Volkow, Nestler နှင့် Shaffer သူတို့ပေါ့ပေါ့ဒီဝေါဟာရကိုသုံးပြီးကြသည်မဟုတ်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်လိင်အဖြစ်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူစကားလုံးက "စွဲ" ကိုအသုံးပြုပါ။ Neurobiologists ဒီစကားလုံး neuromodulatory ဆိုလိုရှိပါတယ်နားလည်ပါသည်။
ရိဒ်အဘို့ et al။ , ဤအခြေအနေတွင်အတွက်စကားလုံးစွဲသုံးစွဲဖို့တာဝန်မဲ့သောစာဖတ်သူကိုဖို့အကြံပြုဖို့ကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်တာဝန်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသဘာဝအစှဲအမှန်ပင်တည်ရှိမသိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုဟန်နှင့်အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ neuroplasticity သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က "လက်ရှိသုတေသနတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းပြဿနာများ conceptualizing များအတွက်အနည်းငယ်သာထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ် ... ။ " သူတို့ကဖော်ပြလာသောအခါလိင်အတွက် neuromodualtion ၏အရေးပါမှုကိုဆုပ်ကိုင်ရန်ပျက်ကွက်သဘာဝအစွဲတည်ရှိလျှင်, ငါတို့သည်နှင့်အခြားသူများကိုယုံကြည်အဖြစ်, ထို့နောက်ကြောင့်ငြင်းခုန်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရ strains Bostwich နှင့် Bucci ဖွငျ့ဖျောပွထားတများကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူရုန်းကန်လူနာချုပ်ဥပမာနေကြသည်မဟုတ်။ 
မကြာသေးမီကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အခြားအလားတူအတွေ့အကြုံရှိ neurosurgeon နှင့်အတူလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်အလုပ်လုပ်တဲ့ neurosurgery အတွေ့အကြုံ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောခွဲစိတ်ဆရာဝန်အလုပ်လုပ်တဲ့ neurosurgery မှတဆင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါအရာလာမည့်လယ်ကိုစွဲလမ်းစေခြင်းငှါ opined ။ သို့သော်မဖြစ်နိုင်အချို့မှယခုပေါ်လာသောကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးစွဲ, ပြင်းထန်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဂယက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဘာသာရပ်မှဤအရပ်မှအဆိုပါဆက်စပ်မှု, limbic ပစ်မှတ်နဲ့ကုသစေခြင်းငှါလာသောအခါတစ်နေ့ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။
သူတို့စွဲ၏သဘာဝအမော်ဒယ်များထောက်ပံ့မဆို neurobiologic အထောက်အထားအသည်းအသန်လက်မခံဖြစ်ကြောင်းငါတို့သည်ဤစာရေးသူ၏အမြင်နှင့်သေံစိတ်ပျက်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အတွက်ဦးဆောင် neurobiologists ΔFosB, ဒါပေမယ့်သဘာဝအစွဲထဲမှာ neuromodulation ပံ့ပိုးသောမည်သည့်ဒေတာများမသာရှုမြင်သောအခြေအနေတွင်အဘို့မိမိတို့ဗြောင်ကျကျအရေးမစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချေပချက်မှာတော့သူတို့ကိုးကားတစ်ခုတည်းသောသက်သေအထောက်အထား neurobiologically အခြေစိုက်ထက်, သဘာဝအမူအကျင့်ဖြစ်သောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကသဘာဝစွဲနှင့် ပတ်သက်. တစ်နိုင်တဲ့ macro သို့မဟုတ်မိုက်ခရိုစကေးအပေါ်ရောဂါဗေဒ neuromodulation အကြံပြုခြင်းဆိုလေ့လာမှုဆန့်ကျင်ကာတောင်းပန်ဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူ permeated ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်းထုတ်ဝေယေးလ်ထဲကတစ်ဦးအစီရင်ခံစာရေးသားခြင်းအမည်ရ "အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု" အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲရှိသူများအတွက်အလားတူအဖြစ် fMRI သုံးပြီးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် activation ဖော်ပြသည်။ သူတို့က "အနှစ်ချုပ်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အစာအကြံပြု စှဲမွဲမှု မကြာခဏပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းဆုလာဘ်-related အာရုံကြော activation နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီ၏ညွှန်းကိန်းများချိတ်ဆက်ရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် အာရုံကြော activation တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူစွဲလမ်းစားအပြုအမူ။ " (အလေးပေးထည့်ပြီး) လွန်မြောက် data တွေကိုသဘာဝအစွဲနှင့်အတူ neuromodulation များ၏ concept ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ကူညီပံ့ပိုးရန်နေဆဲဖြစ်သည်။
: ကနေပွင့်လင်းဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင် http://www.surgicalneurologyint.com/text.asp?2011/2/1/64/81427
12. Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ အင်တာနက်လိင်စွဲမှုကို naltrexone ဖြင့်ကုသသည်။ Mayo Clin proc ။ 2008; 83: 226-30 ။ [PubMed]
ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Ceravolo R၊ Frosini D၊ Rossi C၊ Bonuccelli U. Impulive Control Disorders - အဓိပ္ပါယ်၊ ကူးစက်ရောဂါ၊ အန္တရာယ်အချက်များ၊ neurobiology နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ ပါကင်ဆန် Relat Disord ။ 13; 2009 (ပျော့ပျောင်း 15): S4-111 ။ [PubMed]
14. Colby CR, Whisler K ကို, Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား - တိကျတဲ့ DeltaFosB ၏အလွန်အကျွံထုတ်ဖော် Cocaine များအတွက်မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေတယ်။ J ကို Neurosci ။ 2003; 23: 2488-93 ။ [PubMed]
၁၅ ။ သိပ္ပံ 15; 2007: 317 ။
16. Fowler JS, Volkow ND, Kassed CA, Chang L. စွဲလမ်းနေသောလူ့ ဦး နှောက်ကိုပုံရိပ်ရိုက်ခြင်း။ 2007; 3: 4-16 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၇။ Gearhardt AN, Yokum S, Orr PT, Stice E, Corbin WR, Brownell KD ။ အစားအစာစွဲ၏အာရုံကြော Correlates ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၁ [သတင်းစာတွင်]PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး][PubMed]
18. Hedges VL, Chakravarty S, Nestler EJ, Meisel RL Delta FosB သည်နျူကလိယအက်ဆစ်အလွန်အကျွံထုတ်ခြင်းကြောင့်ဆီးရီးယားအမျိုးသမီးဟမ်းစ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များပိုမိုရရှိစေသည်။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက် Behav ။ 2009; 8: 442-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၁၉။ မျှော်လင့် BT၊ Ny HE၊ Kelz MB၊ Self DW၊ Iadarola MJ, Nakabeppu Y et al ။ နာတာရှည်ကိုကာကိုလာနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုများဖြင့် ဦး နှောက်တွင် Fos ကဲ့သို့သောပရိုတိန်းများပါ ၀ င်သောတာရှည်ခံ AP-19 ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းမှုကို induction ။ Neuron ။ 1; 1994: 13-1235 ။ [PubMed]
20. ဂျွန်ဆင် pm တွင်, Kenny PJ ။ Dopamine D2 receptors သည်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့ဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အဝလွန်ကြွက်များတွင်မစားမသောက်ဘဲစားခြင်း။ နတ်နေရော့စီ။ 2010; 13: 635-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး][PubMed]
21. Jurkiewicz MT, Crawley AP, Verrier MC, Fehlings MG, Mikulis DJ ။ ကျောရိုးဒဏ်ရာပြီးနောက် Somatosensory cortical ကျုံ့: တစ် ဦး က voxel-based morphometry လေ့လာမှု။ Neurology.2006; 66: 762-4 ။ [PubMed]
22. Kim SJ, Lyoo IK, Hwang J, Chung A, Hoon Sung Y, Kim J, et al ။ ရေတိုနှင့်ရေရှည် abstinent methamphetamine အလွဲသုံးစားမှုအတွက် prefrontal မီးခိုးရောင် - ကိစ္စအပြောင်းအလဲများ။ Int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2006; 9: 221-8 ။ [PubMed]
23. Nestler EJ ။ စွဲလမ်းဖို့ဘုံလမ်းကြောင်းရှိပါသလား နတ်နေရော့စီ။ 2005; 9: 1445-9 ။PubMed]
24. Nestler EJ ။ စွဲ၏ကူးယူယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းက္ပ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-55 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25. Pannacciulli N, Del Parigi A, Chen K, Le DS, Reiman EM, Tataranni PA ။ လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်မူမမှန်: တစ် voxel-based morphometry လေ့လာမှု။ Neuroimage.2006; 31: 1419-25 ။ [PubMed]
26. Pitchers KK, Balfour ME, Lehman MN, Richtand NM, Yu L, Coolen LM ။ သဘာဝဆုလာဘ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သည့် mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 872-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27. Pitchers KK, Frohmader KS, Vialou V, Mouzon E, Nestler EJ, Lehman MN, et al ။ နျူကလိယ accucens တွင် DFosB သည်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုအားဖြည့်ပေးရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Genes Brain Behav ။ 2010; 9: 831-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၈။ Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Gläscher J, Büchel C. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ် Neurosci.28; 2005: 8-147 ။ [PubMed]
29. Shaffter HJ ။ [နောက်ဆုံး 2011 ခုနှစ်Aprပြီ6ရက်နေ့တွင်ကိုးကား] ။ မှရနိုင်သည်http://www.divisiononaddictions.org/html/whatisaddiction.htm .
30. Wallace DL, Vialou V, Rios L, Carle-Florence TL, Chakravarty S, Kumar A ။ နျူကလိယအတွက် DeltaFosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသဘာဝဆုလာဘ် -related အပြုအမူအပေါ် accumbens ။ J ကို Neurosci ။ 2008; 28: 10272-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 31. ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas NR, Wong မှန် CT, Zhu W က။ ဦး နှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ Lancet ။ 2001; 357: 354-7 ။ [PubMed]
et al 32. Werme M, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thorén P ကို, Nestler EJ ။ Delta FosB သည်ဘီးပြေးခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22: 8133-8 ။ [PubMed]
et al 33. Zachariou V, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy MP, Kelz MB ။ နျူကလိယအတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ mor morphine အရေးယူမှု accumbens ။ နတ် Neurosci.2006; 9: 205-11 ။ [PubMed]
et al 34. Zhou Y, Lin FC, Du YS, Qin LD, Zhao ZM, Xu JR ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စမူမမှန်: voxel-based morphometry ။ Eur J ကို Radiol ။ 2009 [စာနယ်ဇင်းခုနှစ်တွင်] [PubMed]
"Porn: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းပုံမရပေမယ့်၊ t.co/ASqnpFtFPl
သေချာတာကတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မတွေ့ရသေးပေမယ့် pandemi ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။ t.co/CxPrRbKufK